FANAPARITAHANA RONGONY AO IHOSY : Tratra i Ralavasomitra sy ny ekipany
Manao tohy vakana hatrany ankehitriny ny fanokafana fanadihadihana momba ireo andian’olona mpanao afera sy mpanaparitaka zava-mahadomelina eto amintsika. 17 septembre 2019
Ankoatra ny ezaka tratrarin’ny zandary mpanao fisafoana amin’ny Faritra maro dia mandray an-tanana ny fikarohana ireo olona voatonontonona ho ambadik’izany ihany koa ny eo anivon’ny Polisim-pirenena miasa any amin’ny Faritra Atsimon’ny Nosy. Efa aman-taonany maro ireo mponina ao anatin’ny Distrikan’Ihosy no velon-taraina mahakasika ireo mpivarotra rongony ao an-toerana, mahazo vahana ny fiparitahana ary saika midoroka izany avokoa ireo tanora.
Hany ka manjaka dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana nohon’ny fironan’ireo tanora amin’ny asa ratsy. Araka ny loharanom-baovao voaray dia olona miisa efatra no voasambotry ny Polisy tao Ihosy tamin’ny alakamisy 12 septambra 2019 lasa teo nohon’ ny resaka fivarotana rongony. Nandritra ny fisokafan’ ny fanadihadiana notanterahin’ny Polisy dia fantatra fa nisy rangahy iray antsoina amin’ny anaram-bositra hoe Ralavasomitra no malaza fa mpamatsy rongony eo an-toerana. Nohon’ny fiaraha-miasa amin’ny fokonolona sy ny Polisy no nahafantarana ny trano fonenany izay tao amin’ny fokontany ambany andrefana akaiky an’i Ambatoara.
Tsy niandry ela intsony araka izany fa nidina ifotony nijery ny raharaha ny Polisy. Tra-tehaka tao amin’ny trano iray Ralavasomitra niaraka tamin’ny namany telo hafa izay mpividy rongony ao aminy ary nahatratrarana rongony iray zerikana efa vonona hamidy sy rongony tapaky ny harona sase roa izay mbola amin’ny tahony ary rongony efa voafono maromaro. Mitohy hatreto ny fikarohana ireo olona mpanaparitaka rongony ao anatin’ity Distrika ity.